Ganacsato lagu eedeeyay inay musuqmaasuqeen gargaarka dadkii dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda Baladweyne – Maanta Online
Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka socda gurmadka loo fidinayo dadkii waxyeelada ka soo gaartay fatahaadda wabiga Shabeelle, halkaasi oo weli ay gaarayaan deeqaha iyo samafalka isugu jira mid ka yimid hay’adaha caalamiga ah, kuwa maxalliga ah iyo gargaar kala duwan oo ay iska soo ururiyeen shacabka dalka gudihiisa degan iyo Jaaliyadaha Soomaalida dibadda.
Warar lagu kalsoon yahay oo naga soo gaaraya magaalada Baladweyne ayaa sheegaya in hay’adaha garsoorka heer federaal iyo kuwa maamul goboleedka Hirshabelle ay hayaan kiisas ku saabsan musuqmaasuq lagu sameeyay shixnado gargaar ah, kuwaasi oo maamulka magaaladaasi uu sheegay inay u badan yihiin kooxo ganacsato ah.
Guddoomiye Ku xigeenka arrimaha bulshada magaalada Baladweyne Sheekh Xuseen Cusmaan Cali ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in inta badan laga hortegay musuqmaasuq lala damacsanaa gargaarka loogu talo galay dadka dhibaatada ka soo gaartay fatahaadii halkaasi ka dhacday.
“Cid kasta oo musuqmaasuq ku kacda waa la soo qabanaa, waana imaan kartaa in qof loo soo qabto balse hay’adaha garsoorka ayaa kala caddeyn doona cida ay ku cadaato musuqmaasuq” ayuu yiri Sheekh Cusmaan Cali guddoomiye Ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan.
Waxaa kale oo Sheekh Cusmaan uu sheegay in magaalada Baladweyne ay ka sii yaraanayaan biyihii magaalada dhexdeeda ceegaagay, hase yeeshee waxa uu sheegay in maamulkoodu bilaabay wacyi gelin uu dadweynaha uga digayo saameynta caafimaad xumo ee ka dhalan karta, wuxuuna sheegay in maamulka gobolka iyo hay’adaha samafalka iska kaashanayaan sidii loo buufin lahaa meelaha ay sida ba’an u saameeyeen fatahaadaha.
“Guddiyo ganacsato ayaa u badan deeqda laga musuqmaasuqay dadkii fatahaadda Baladweyne dhibaatada ka soo gaartay” ayuu yiri Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan oo sheegay inay qorsheynayaan dabayaaqada bishaan ay guryahooda dib ugu laabanayaan dhammaanba qoysaskii ka barakacay guryahooda.
Dhinaca kale Sheekh Xuseen Cusmaan ayaa sheegay in meelo badan uu ka yimid, isagoona sheegay in qeyb ahaan gargaarka kala duwan ee ka degay magaalada Baladweyne ay geeyeen ganacsato iyo dad iskood isku xilqaamay, isagoona sheegay in fatahaada wabiga ee ka dhacday magaaladaasi ka duwan tahay kuwii hore isla markaana aad uga badan tahay khasaaraha gaaray shacabka ku dhaqan magaaladaasi.
Baladweyne – Hiiraan
← Xisbi siyaasadeed Muqdisho ku qabtay kulan weyne aan loo kala harin
Waan waan lagu soo afjarayo khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Biixi iyo xisbiga Wadani oo Hargeysa ka bilaabatay →
LAFTA GAREEN: “Roobow ma xirna ee Guri ayuu degan yahay”
JAN. Odowaa oo maanta la wareegay xilka Taliyaha ciidamada Xoogga dalka